बुबाको मुख हेर्ने दिन : 'संघर्ष र दु:खले जेलिएको बुबाको मुहार' बुबाको मुख हेर्ने दिन : 'संघर्ष र दु:खले जेलिएको बुबाको मुहार'
बुबाको मुख हेर्ने दिन : ‘संघर्ष र दु:खले जेलिएको बुबाको मुहार’
पर्बत बस्याल – धेरैले लेखे आमाको बारेमा लेख र रचना । धेरै सुनियो आमाका पिडाहरु तर आज मैले यस बुवाको मुख हेर्ने दिनमा बाबाको बारेमा केही लेख्ने मन भएकोले लेख लेख्दै छु । आज एक दिन मात्र बुवाको स्मरण गरेर बुवाप्रतिको कर्तव्य पूरा हुदैन। दुखको बेलामा मात्र केहि आवश्यकताको बेला मात्र बुवालाइ स्मरण गरेर हुँदैन । बुवाको मायालाई साहेत भाग्यमानीले मात्र ग्रहण गरेका हुन्छन् । हेर्नुस त ती अबोध छोराछाेरी जसका बुवा जन्मजात थिएनन ।
जसका बुवा कामको सिलसिलामा संसार त्याग्नु पर्याे उनिहरुलाइ थाहाँ छ बास्तविक अभाव बुवाबिनाको त्यो बिटुलाे जिन्दगी । बुवाको सम्झनामा मनाइने आजको दिन याद आयो मलाई पनि आफ्नो छोराछोरीको भबिस्य र आफ्नो परिवारको भबिस्यलाई उज्यालो पार्ने सपना कतै टुट्छ कि भनेर राम्ररी निदाउन सक्नु भएन होला । आफ्ना हरेक इच्छा तथा आकांक्षालाई त्यागेर केवल छोराछोरीको खुसी मात्र देख्ने ती महान बुवाप्रती आफुले के-के गरियो ? के-के त्यागियो ?
याद गरौं त ! आफुले च्यातिएका चप्पल र लुगा लगाएर भए पनि हरेक चाडपर्व र आवश्यकताको बेलामा हर संघर्ष गर्दै हाम्रो आवश्यकता पुरा गरिदिएकोमा हाम्रो खुशी देखेर आफू गदगद भएको याद गरौं त । कयौं तनाव र पिडा बोकेर पनि हाम्रो अगाडी आसु खसाल्न सक्नु भएन, बुवा खुशी हुनुहुन्छ भन्ने गराउनकै लागि उहाले कहिलै आफ्नो दु:ख कसैसामु बाड्नु भएन । मैले पहिले पहिले सोच्थे बुवालाइ कुनै तनाव छैन तर उहासंग त पिडा लुकाउन सक्ने कला रहेछ । आफ्नो मुटुलाई ढुङ्गाको जस्तो मन गराउनु भएको रहेछ। त्यसैले त आफू यति धेरै पिडामा हुँदा पनि दुनियाँ सामु खुसिको नाटक रच्न सक्नुभयो । घरमा मिठो मसिनो पाक्दा अरुलाई नपुग्ने हो कि भनेर थोरै खाएर मलाई पुग्याे भन्दै उठेको पुगेरै होला भन्ने सोच्ने यो मनले आज कल्पना गर्दै छु बुवाको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना छोरा छोरीको खुसीमा रमाउन चाहने हुनुहुदो रहेछ। स्मरण गरौं त आफ्नो बुवाको संघर्ष र दु:ख आखिर उहाँको लागि मात्र थियो त त्यो त्याग ? सबै पिडा आफू मात्र लिएर हामीलाई खुशी दिएको बदलामा हामिले के दियौं ?
अझ कसैले त बृद्धआश्रममा लगेर छाडेकाे खबर सुन्दा मन धेरै रुन्छ । आखिर त्यहि दिन देख्न र भोग्नकै लागि होला बुवाले हाम्रो लागि यति धेरै मेहेनत गरेर जिन्दगी बिताएको । सम्पुर्ण बुवाहरुमा नमन !